Drafitra madio sy maoderina miaraka amin'ny lova mahery vaika - Famolavolana amin'ny hazo teraky ny volafotsy iray
Home / Interior design / Volavola madio sy maoderina manana lova mahery vaika - Famolavolana amin'ny hazo teraky ny volafotsy iray alina
Volavola madio sy maoderina manana lova mahery vaika - Famolavolana amin'ny hazo teraky ny volafotsy iray alina
2020 / 10 / 18 FisokajianaInterior design 1289 0
Firaisana an'arivony famolavolana endrika an'arivony Oaks
Ny renirano mavo, ny Taihang mijoalajoala, ary ny reniranon'i Fen, izay mianavaratra sy mianatsimo, dia mampitohy ny vovo-tany anatiny. Hatramin'ny andro taloha, ny tanànan'ny dragona Taiyuan dia loharanon'ny harena an-kibon'ny feng shui, toy ny vato eo afovoan'ny tany mampidi-doza sy hafakely, manatri-maso fiovana tsy tambo isaina.
Ny valan-javaboary sy ny renirano ho avy dia manodidina ny afovoan-tanàna vaovao, izay iray amin'ireo teboka stratejika lehibe indrindra ao an-tanàna. Rehefa miadana ny tanàna taloha be olona eo afovoan'ny fampandrosoana an-tanàn-dehibe, ny tanàna vaovao manana fahavelomana vaovao dia hazava amin'ny jirony ihany. Ny biraon'ny varotra Rongchuang dia namboarina ho tandindon'ny tanàna vaovao, izay hipoitra fiainana vaovao manintona kokoa ho an'i Taiyuan Longcheng.
Fiakarana an-tendrombohitra sy renirano
Ny fananganana Abstract ny tanàna iray
Raha misy tanàna asehon'ny maritrano sy ny habakabaka, nanao ahoana ny endrik'ilay Tanànan'ny Dragon ao Taiyuan? Amin'ny sarintany, ny lemaka, tendrombohitra ary ny renirano dia tsy mamariparitra mazava tsara ny toerana misy ny tanàna, fa mamolavola ny toetrany amin'ny tantaran'ny fiovana lava. Ny toetran'ny tanàna dia namboarina tamin'ny tantaran'ny fiovana hatrizay. Tsy misy curl sy curl amin'ny tanàna kely iray any atsimo, ary tsy misy koa ny hafanana matevina ao anaty tanàna iray izay te-hiresaka, fa ny hatsarana lehibe sy ny toetran'ny tanàna tsy hay lazaina.
Ao amin'ny habakabaka, ny tsipika mahitsy sy ny polyline dia mamaritra sy mizara faritra maro samihafa; faritra lehibe amin'ny haingon-trano dia manalefaka ny antsipiriany tsy ilaina; mifandimby mainty sy fotsy ary miova toy ny gadona mazava; ny zava-kanto sy ny tontolo no iankinan'ny aina sy ny tontolo.
Hatramin'ny rihana voalohany ka hatrany amin'ny rihana faharoa, ny fananganana abstract ny tanàna iray izay velomina tendrombohitra, vatolampy sy renirano, ary ny fametrahana zavakanto sy kapoka ara-drafitra tsy mahazatra dia mitondra ny tanàna ao anaty habakabaka feno eritreritra.
Ao amin'ny rafitra, ny tsipika sy ny fiovan'ny loko, ny habaka, toy ny tanàna, dia mamorona ny endriny manokana.
Miditra amin'ny tontolo mitsingevana
Ny rihana voalohany
Miditra amin'ny efitrano malalaky ny rihana voalohany, misokatra sy mamirapiratra ny faritra fandraisana, ary ny firakotra fotsy amin'ny vatana iray manontolo dia rakotra vato mainty lava sy tery izay miainga avy eo ambony ka hatrany amin'ny tany, toy ny riandrano vato mikoriana avy eo amin'ny an-tendrombohitra. Ny latabatra fandraisam-bahiny, vita amin'ny vato mainty sy fotsy, dia lava, tery ary tsotra, mamorona fahatsapana hazavana manoloana ny habakabaka.
Ny tsipika jiro midina avy ao amin'ny dome sy ny vato mitambatra amin'ny rindrina dia mamorona fifandraisana marindrano sy mitsivalana izay miteraka fahatsapana fialan-tsasatra, fisokafana ary fitoniana.
Avy eo amin'ny faritra fandraisana ka hatramin'ny ankavia mankany amin'ny boaty fasika any amin'ny faritra afovoany, misy boaty jiro lehibe mivoaka avy amin'ny valindrihana ary manarona ny tampon'ny boaty fasika eo ambonin'ny vato, ary eo ambanin'ny rindrin'ny rindrina mainty sy fotsy, ny tany ara-barotra rehetra an'ny Rongchuang dia feno tanjaka.
Avy amin'ny rihana voalohany dia mivalona sy mihodina ny tanamanga mainty, ary ny dingana fotsy farany dia latsaka amin'ny tany, toy ny fidirana misokatra, miandry ny mpanjifa hitarika any amin'ny faritra tsy fantatra.
Afa-tsy ny tohatra, ny escalator dia rakotra veneer hazo mainty, ary amin'ny zoro iray hafa, mijery avy any ambanin'ny tohatra, ny firafitry ny trano dia toa tendrombohitra miakatra miakatra sy maniry eo amin'ny habakabaka.
Ny efitrano mainty mitsambikina avy eny amin'ny lanitra dia toy ny sambon-danitra mihodinkodina, ny bolam-pahazavana manantona ary ny asan'ny planeta metaly dia miresaka ny mety hisian'ny fiainana amin'ny ho avy, ny fametrahana sy ny sary hosodoko zavakanto dia manaisotra ireo marika voajanahary, manomboka miakatra ny eritreritra tsy voafetra ao amin'ny tontolon'ny mainty sy fotsy tsy voafetra, ary ny anjara toerana sy ny fiasan'ny habaka koa dia lasa tsy tokana intsony.
Ao amin'ny faritra fifampiraharahana eo akaikin'ny varavarankely amin'ny rihana voalohany, manankarena ny fitaovana sy ny loko.
Ny marbra mineraly voajanahary dia atsofoka ao amin'ny gorodona avy amin'ny valindrihana, ary milatsaka ny jiro malefaka, mampifanaraka ny mainty sy fotsy.
Ny fanampiana ny volondavenona sy maitso dia mitondra ny gadon-dohataona. Ao amin'ny karipetra volondavenona fotsy, ny sofa dia malefaka sy zoro toa ny vato amin'ny tany, ary ny seza sandry maintso dia manohy an'io fironana io. Ny seza volontsôkôlà maintso dia mitohy amin'ny endriny mitovy ihany, miaraka amin'ny tendrombohitra, ny tany sy ny rano tafiditra ao anaty akora sy fanaka ary ny antsipiriany manankarena rehetra nalamina mba hamoronana rivo-piainana milamina ao amin'ny faritry ny fihaonana.
Ny metaly mikoriana, ny jiro "eclipse annular" amin'ny alina ary ny meteorite mivezivezy …… dia manohy mamoha sy mamolavola ny fisainanao amin'ity faritra ity ny sary aman-droa, toy ny hoe mijery lambam-baravarana tsy miato ianao.
Hiverina any amin'ny Tender City
Ny fametahana ny escalator mainty sy fotsy ho any amin'ny rihana faharoa, ny tontolo mihozongozona ary ny endrika voajanahary tsy mitsaha-mitombo dia mihalemy ary soloin'ny faritra malalaka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ao anaty paleta ambany.
Ny velaran-kazo midadasika amin'ny valindrihana sy ny gorodona dia manome endrika toy ny ala azy, ary raha tokony ho rindrina dia mampiseho talantalana misy haavo samy hafa sy zava-misy mitambatra mamaritra ny faritra samihafa. Ny fampisehoana an-trano ny fanaka, ny boky ary ny zavakanto koa dia manangona ny fahatsapan'ny olombelona hatramin'ny tsy manam-petra ary mametraka azy ireo amin'ny toerana mivaingana kokoa.
Ny efitrano fandraisam-bahiny ho an'ny ankizy dia natao ihany koa amin'ity habaka ity, miaraka amina karipetra maintso fotsy sy fanaka malain-dalao ho an'ny ankizy miloko manankarena sy malefaka, izay hita taratra amin'ny fijerin'ny tanàna.
Ny sofa matevina sy mahazo aina ary ny fatana mihantona eo afovoan'ny fahitana dia mamorona toerana fialan-tsasatra azo antoka sy azo antoka ao anaty ala anaty tanàna, ahafahanao mipetrapetraka manodidina ny fatana nefa tsy mifanelingelina, ary miandry fotoana fohy hidirana ao amin'ny efitrano fampirantiana, mamita tetezamita tonga lafatra ny habaka sy ny toe-po.
Andro sy alina, vatolampy sy renirano, izao rehetra izao ary ny tanàna …… dia manamboatra sary mifanohitra nefa mampitohy manerana ny habakabaka, manamafy ny sarin'ny tanàna taloha ary manitatra ny fari-taniny, rehefa misy tantara vaovao miseho ao amin'ireo faritra vaovao ao an-tanàna.
Fampahalalana ny tetikasa
Famolavolana anatiny: W Studio Oak Architectural Design Consulting (Beijing) Co.
Namboarin'i Hua Wei sy Song Weihua
Ekipa mpamorona: Zhao Panpan, Wang Limei, Li Xiangyan, Liu Qian
Ekipa A: Li Meng, Bai Lan, Zan Xiangyu, Suo Li
Faritra famolavolana: Sales Office 1000m2
Fotoana famolavolana: 2020.5
Daty famaranana: 2020.9
Saripika: Jery sary ho an'ny firafitra
W Design dia orinasam-panamboarana matihanina vaovao niforona tamin'ny taona 2015. Ny mpikambana ao aminy dia ny orinasa mpamorona fanta-daza iraisam-pirenena. Manam-pahaizana manokana amin'ny tetik'asa fandraisam-bahiny, fialamboly, fonenana ary birao izy ireo, ary ny mpamorona sy ny mpiara-miasa aminy manan-danja dia manana traikefa famolavolana 20 taona sy fomba fijery iraisam-pirenena. Ny fanoloran-tena amin'ny tetikasa, fanavaozana, fanehoan-kevitra ary hetsika dia fanahin'ny orinasa.